समृद्धिका लागि विवेकशील नै रोज्‍नुपर्छ : सचेन घले - Nayabulanda.com
१४ मंसिर २०७४, बिहीबार २३:१३ 474 पटक हेरिएको
विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिध सभा सदस्यका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर १ का प्रत्यक्ष उम्मदेवार सचेन घले ।
इलाम : दोस्रो चरणको प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा इलाममा चुनावि माहोल पनि तात्दै गएको छ । राष्ट्रका शीर्ष नेताहरुको चुनावि मैदानका रुपमा रहेको इलामले यतु बेला सबैको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । यहाँबाट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पुर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पुर्व राज्यमन्त्री केशव थापा लगायतका शीर्षस्थ नेताहरु विचको चुनावी प्रतिस्पर्धाका कारण इलाम निकै चर्चामा रहेको छ । चुनाव नजिकिए सँगै उम्मेदवारहरु मतदाता सामु पुग्ने र आफ्नो पक्षमा मत माग्ने क्रम जारी छ । यसैक्रमा नयाँ बुलन्दकर्मी नरेन इलामेलीले इलाम क्षेत्र नं १ मा विवेकशिल साझा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधी सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार सचेन घलेसँग कुराकानी गरेका छन् । घले २७ वर्षीय युवा जो काठमाण्डौमा अध्यननरत रहँदा रहँदै विगत २ र्षदेखि तत्कालिन विवेकशिल नेपालीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा स्वास्थ्य क्रममा भएका हरेक अनसन र सत्याग्रह साथै भ्रष्टाचार बिरोधी आन्दोलनलाई सशक्त साथ दिँदै आएका साथै विभिन्न परोपकारी संघ संस्थामा आवद्ध भई समाजसेवा गर्दै आएका घले युवा पुस्तामा निकै लोकप्रीय छन् । उनले अंग्रेजी विषयमा स्‍नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् । प्रस्तुत छ घलेसँग गरिएको कुराकानी :
तपाई इलाम क्षेत्र नं १ बाट चुनावि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । तपाईको उम्मेद्वारी किन र के का लागि ?
मेरो उम्मेदवारी विशेषतः इलामको समृद्धिका लागि नै हो । नेपालको इतिहासमा राजनैतिक व्यवस्थाहरु धेरै परिवर्तन भए तर अवस्थाहरु परिवर्तन हुन सकेनन् । अब हामीले राजनैतिक मुद्दाहरु लिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन जति अघि बढ्नु छ समृद्धिका लागि मात्रै हो । त्यसैले इलामलाई समृद्ध बनाउनका लागि असल चरित्र भएको इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ मान्छे चाहिन्छ भनेर नै मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ । यसमा मेरो व्यक्तिगत चाहना पनि हो र पार्टीले पनि मलाई विश्वास गरेर यो मान्छेले इलामको कुशल नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर निर्णय गरेकाले पनि मैले यस क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
चुनावी कार्यक्रम लिएर तपाईं गाउँ गाउँमा पुगिरहनु भएको छ । मतदाताहरुको चाहना गुनासाहरु कस्तो पाउनु भयो ?
आम मतदाताहरुको चाहना भनेको आधारभुत आवश्यकता (गाँस, वास, कपास) नै हो । ठुलो चाहना छैन, यहाँ भएको बाटो बनिनु पर्यो, विजुली आउनु पर्यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था स्थानीय स्तरमै हुनु पर्यो भन्ने नै छ । विशेषगरी बैदैशिक रोजगारीका लागि गएका परिवारका सदस्यलाई यही स्थापित गरेर रोजगारी दिनुपर्यो भन्ने उहाँहरुको सपना छ । र पुरानो नेतृत्वले यसका लागि आश्वासन मात्रै दिएकोले अब नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्छ भन्ने विचार मतदाताहरुको छ ।
तपाई चुवावमा जाँदै गर्दा के कस्ता योजना/अजेण्डाहरु लिएर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
इलामका लागि प्रमुख अजेण्डा भनेको कृषि र पर्यटन नै हो । जसको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो इलाम । हामीले भूगोल र परिवेश सुहाउँदा योजनाहरु बनाएका छौ । हरेक क्षेत्रहरुलाई आधुनिकिकरण गर्दै लैजाने जस्तै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य । कृषि आधुनिकिकरणका लागि उन्नत जातका विउ विजनको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि बिज्ञहरुको व्यवस्था गर्ने, कृषि उपजहरुको सहज प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्ने, आवश्यक्ता अनुसार उचित भण्डारणको व्यवस्था गर्ने, कृषक समुहहरु अनुसार निर्माण गरी सामुहिक कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन र कृषि मार्ग निर्माण गर्ने, पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने, युवा स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातलाई समय सापेक्ष विस्तार गर्ने जसका लागि हरेक वडामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने साथै हरेक माध्यमिक विद्यालयमा इ- लाइब्रेरीको व्यवस्था गर्ने, इन्टरनेटको विस्तार गर्ने र खेलकुद विकासका लागि राष्ट्रिय स्तरको एउटा खेल मैदान बनाउने जस्ता योजनाहरु हामीसँग छन् ।
इलाम देशकै एउटा सुन्दर जिल्ला भए पनि अपेक्षाकृत विकास हुन नसक्‍नुको कारण के होला ?
यसको प्रमुख कारण त असल नेतृत्वको अभाव नै हो । नीतिहरु राम्रा राम्रा आए तर असल नेतृत्व यस ठाउँले पाउन सकेन । यहाँ एउटा रसजनैतिक जालो छ जसले आफू पनि त्यो जालोबाट जालो निस्कन नसक्ने र अरुलाई पनि काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गरेको छ । जसले गर्दा नीतिहरु कार्यन्वयन हुन सकेनन् । जब सम्म असल नेतृत्वको कमी हुन्छ तब सम्म विकास सम्भव छैन त्यसैले अब भने असल र इमान्दार नेतृत्व खोज्नुपर्छ, अनि मात्रै इलामको समृद्धि सम्भव हुन्छ ।
तपाईं एउटा सशक्त युवा व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी नरोजेर किन राजनीति नै रोज्नुभयो ? त्यस्तो हैन, विवेकशील साझा पार्टीको नियम नै छ आफूले सक्ने कुनै काम रोजगारी नगरी विवेकशिल साझा पार्टीमा प्रवेश नै गर्न पाईंदैन । त्यसैले म पनि कुनै एउटा काममा आवद्ध नै छु । कामसँगै राजनितीमा पनि सक्रिय छु । हाम्रो पार्टीमा राजनीतिका लागि घर वा घरका लागि राजनीति छोड्नुपर्ने अवस्था छैन ।
विवेकशिल साझालाई नै मतदान किन ?
विवेकशिल साझालाई मतदान गर्नुपर्ने कारणहरु धेरै छन् । हामीले अहिलेसम्म खोजेको मुल्य र मान्यताको राजनीती हो त्यो हुन सकेन । मुल्य मान्यता भित्र अडिग रहेर राजनीती गर्नुपर्छ । जसका लागि हामीलाई उत्कृष्टता, पारदर्शिता, इमानदारिता र पद्धति यी चार खम्बाहरु चाहिन्छन्। यी चार खम्बाहरु विना राजनीती सफल हुन सक्दैन र नेतृत्व पनि असल हुदैन र पार्टी पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन। देशमा कुनै पनि पार्टीहरु पद्धति अनुसार चलेका छैनन्। तर हाम्रो पार्टीमा भने यी चार खम्बाहरुलाई टेकेर आएको नेतृत्व जनताकै हित र समृद्धिका लागि आएको हो। यसलाई जनताले मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने मतदाताको निर्णय हो। तर हामी विशुद्ध समृद्धिको मुद्दा लिएर अघि बढेका छौँ, देशमा राजनैतिक आन्दोलन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, राजतन्त्र फर्काऊँ , संविधान संसोधन गर्नका लागि अर्को आन्दोलनको तयारी गरौँ भन्ने मुद्दा छैनन् हामीमा किनकी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नका लागि हाम्रो संविधान कहिँ पनि बाधक छैन । विकासका मुद्दा मात्र हुन जुन विवेकशिल साझाले पुरा गर्न सक्छ र त्यो क्षमता भएको नेतृत्व पनि हामीसँग छ भने पछि हामीलाई मतदान गर्न नहुने कुनै कारण नै छैन । समग्रमा समृद्धिका लागि विवेकशिल साझालाई नै मतदान गर्नुपर्छ ।
तपाईँको जित्ने सम्भावना कतिको छ ?
जित्ने सम्भावना प्रशस्त छ । विवेकशील साझा प्रति धेरैको आकर्षण बढेको छ । तर यही अवस्थामा हामी जित्छौँ भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन । तर अन्त्यसम्म प्रयास गर्दा हामी जित्न सक्छौ ।
तपाईँसँग राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ कसरी जित्नुहोला र ?
चुनौति अवश्य छ । उहाँहरुको नेतृत्व वास्तवमा ठूलो नभएर कमजोर नेतृत्व हो भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । विगत दुई दशक भन्दा बढि यस ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्दा पनि इलामलाई समृद्ध बनाउन सक्नु भएन जसले प्रमाणित गरेको छ । तर जनताहरुमा चेतना ल्याउन जरुर छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले नागरिकहरुलाई विवेकशिल बनाउने हो । विवेकशिल नागरिक तयार गरेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा जित सम्भव छ। अबको पुस्ताले समृद्धिका लागि विवेकशिल साझालाई नै रोज्नुपर्छ । सबै ठाउँमा आफूलाई पुर्याउन सकिँदैन तपाईँहरु जस्तै पत्रकारहरु मार्फत हामी आम समुदाय सम्म पुगिरहेका छौँ यसले पनि हाम्रो माहोल बढ्दै गएको छ ।
चुनावमा पैसाको चलखेल हुन्छ भन्छन तपाईँको बुझाई के छ ?
चुनाव जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसले निकाल्यो थाहा छैन तर म चाहिँ यो मान्यतालाई मान्दिँन। अरुको प्रचार शैली र हाम्रो प्रचार शैली फरक छ । अरुले के गर्दा मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न सकिबन्छ आफूलाई मत आउँछ भन्ने तिर लाग्छन र बढि पैसा खर्च गर्ने, मतदातालाई पैसा बाँड्ने गर्छन तर हामी त्यस्को विरोधी हौँ, भ्रष्टाचार रहित राष्ट्रको निर्माणका लागि हामी अघि बढेका हौँ। हामी विशुद्ध विचारको राजनीति गर्छौ हाम्रा विचार जनता सम्म पुर्याएर बुझाउन सक्यौ भने मतदाता आफै उत्साहित भएर मत दिन्छन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
अन्त्यमा आम मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अन्त्यमा राम्रो मान्छे तपाईँले देख्दा देख्दै पनि तपाईँको आफ्नै वाध्यताका कारण असल नियत नभएको , इच्छा शक्ति नभएको व्यक्तिलाई मतदान गर्नुभयो भने फेरी पनि देश लामो समय सम्म पछाडी धकेलिन्छ जसका कारण समृद्धि त कुरै छोडौँ हाल सम्म प्राप्त अधिकारहरु समेत गुमाउँनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले यस पटक सचेत बनौँ र विवेकशिल साझालाई नै रोजौ। हामीले सुरु मै भनेका छौँ यस पटक राष्ट्रिय पार्टी अर्को ‌पटक सरकारको नेतृत्व त्यसैले यस पटक तारजु चिन्हमा मतदान गरि अत्याधिक मतले हाम्रो विजयी गराई समृद्धिको मार्ग दर्शन गराउँनुहुन आम मतदाताहरुमा अग्रह गर्दछु ।